सातै प्रदेशका प्रदेशप्रमुख को–कस्ता ? - Damak No.1 Online Patrika
सातै प्रदेशका प्रदेशप्रमुख को–कस्ता ?
काठमाडौं । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि सिर्जना भएको नयाँ संरचना हो, प्रदेश ।
लामो समयको विवाद र अन्योलकाबीच बुधबार अपराह्न सरकारले सातै प्रदेशमा प्रदेशप्रमुख नियुक्तिको निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदबाट प्रदेश नम्बर–१ को प्रदेशप्रमुखमा सिफारिस भएका डा. गोविन्द सुब्बा अंग्रेजीका प्राध्यापक हुन् ।
धनकुटाका स्थायी बासिन्दा सुब्बा पछिल्लो समयमा नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास)का प्राध्यापक थिए । सुरुमा अखिलको राजनीति गरेका सुब्बा जनमतसंग्रहपछि नेपाली कांग्रेसमा लागेका थिए ।
उनी २०४९ सालमा स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसबाटै धरान नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवार बनी पराजित भएका थिए ।
प्रदेश–२ को प्रमुखमा सिफारिस भएका रत्नेश्वरलाल कायस्थ कृषि मन्त्रालयका पूर्वसचिव हुन् । महोत्तरीका स्थायी वासिन्दा कायस्थ राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि सदस्य भएका थिए ।
विज्ञताको हिसाबले जलस्रोतविद्समेत रहेका कायस्थ संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय नेता पनि हुन् ।
प्रदेश नम्बर–३ को प्रमुखमा सिफारिस भएकी अनुराधा कोइराला माइती नेपालकी संस्थापक हुन् । बेचिएकी चेलीको उद्धार गर्दै आएकी कोइरालाको पुख्र्यौली थलो ओखलढुंगाको रुम्जाटार हो ।
सन् २०१० को सीएनएन हिरोज्को अवार्ड प्राप्त गरेकी कोइरालाले भारत सरकारबाट पद्मश्री सम्मानसमेत पाएकी छन् । तत्कालीन शाही सरकारमा सहायक मन्त्री बनेकी उनी पछिल्लो संसदीय निर्वाचनको समयमा नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेकी थिइन् ।
यसैगरी, प्रदेश नम्बर–४ को प्रदेशप्रमुखमा सिफारिस भएका बाबुराम कुँवर पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हुन् ।
अर्घाखाँची स्थायी घर भएका कुँवर कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीहरुको संगठन डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । कुँवर सुशील कोइराला सरकारको पालामा महान्यायाधिवक्ता बनेका थिए ।
प्रदेश नम्बर–५ को प्रदेशप्रमुखमा सिफारिस भएका उमाकान्त झा पूर्वस्वास्थ्यसचिव हुन् । उनी खिलराज रेग्मीको मन्त्रिपरिषदमा मन्त्रीसमेत बनेका थिए । झा राजपा नेपाल अध्यक्षमन्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरका सम्धी पनि हुन् ।
यस्तै, प्रदेश नम्बर–६ को प्रदेशप्रमुुखमा सिफारिस भएका दुर्गाकेशर खनाल बुद्धिजीवी हुन् । सुर्खेतका खनाल बहुदल आएपछि कांग्रेसबाट राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत बनेका थिए ।
७ नम्बर प्रदेशका प्रदेशप्रमुखमा सिफारिस भएका कैलालीका मोहनराज मल्ल राजनीतिज्ञ हुन् ।
राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यसमेत रहेका मल्ल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य थिए । उनी केही वर्षअघि कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने प्रदेशप्रमुखले संविधानबमोजिम नेपाल सरकारको प्रतिनिधिकोरुपमा कार्य गर्दछन् ।
राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुअगावै पदमुक्त गरेमाबाहेक प्रदेशप्रमुखको पदावधि ५ वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।